» यी १५ प्रेरक भनाइ, जसले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ ! यी १५ प्रेरक भनाइ, जसले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ ! – हाम्रो खबर
जीवन संघर्षशील छ । हरेक उतारचढावबीचको यात्रा नै जिन्दगी हो । जिन्दगीमा सफलता त्य¥ही व्यक्तिले हात पार्छ जो निरन्तर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको खटिरहेका हुन्छन् । मा¥निस हरेक समय ऊर्जाशील जीवन जिउने अभिलाषा राख्ने गर्छ । तर जीवन सधैँ सोचेजस्तो भइदिँदैन। त्यसो हुँदा मानि¥सहरु तनावमा पनि रहने गर्दछ । हामी आज तपाईलाई विभिन्न महान व्यक्तिहरुको प्रेरक भनाइहरु प्रस्तुत गर्न ग¥इरहेका छौँ । केही प्रेरक भ¥नाइ जसले तपाईंको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
१. यदि सफलतम जीवन जिउनु छ भने, हामीले असफलताको भय त्याग्नु पर्दछ ।२. जीव¥नलाई ‘भागेर’ होइन ‘भोगेर’ जिउनुपर्दछ ।३. आफूलाई अरुजस्तो बनाउन खोजेर तिमी ‘आफ्नै’ अस्तित्वको हत्या नगर । तिमी फरक छौ, तसर्थ तथ्यपरक छौँ ।४. बदला लिएर होइन बदलिएर देखाऊ, दुनियाँ फरक पाउनेछौ ।
५. हिजो गइसक्यो, भोलि आएकै छैन, हामीसँग आज छ । आउन यसैलाई मनाऔं ।६.यदि तिमीले व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौ भने उसलाई प्रेम गर्न बिर्सन्छौ ।७. जिन्दगी उनीहरूको बर्बाद हुने हो, जसले उन्नत बनाउन कुनै प्रयास गर्दैनन् ।८. असम्भव भन्ने कुरो वास्तवमा हाम्रो भ्रम मात्र हो ।
९ .हामी त्यही बन्छौं जुन कुरा ल¥गातार गर्दै रहन्छौ । त्यसैले कामले हैन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरोमा पुर्याउँछ ।१०. अरुले आफ्ना बारेमा के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण होइन । आफूले आफ्नाबारेमा के सोचिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो ।११. त्यो नै असल मानिस हो, जसले हरेक बिहान ऐना हेर्दा, प्रतिबिम्बमा आउने मानिसप्रति गर्व गर्न सक्छ ।
१२.एउटा साँचो मानवले कसैलाई पनि घृणा गर्दैन ।१३. यहाँ न असल छ न त खराब नै असल(खराब त हाम्रो सोचाइको उपज हो ।१४. एउटा ढोका बन्द हुदाँ के तिमीलाई थाहा छ दोस्रो खुलेको हुन्छ ।१५.मेरो चिन्ता तिमी असफल भएका प्रति होइन कि असफलताका बाबजुद तिमीले नदिएको निरन्तरताप्रति छ